भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत आयात, मूल्य प्रतियुनिट ३.८१ भारु पर्ने – News Dainik
News desk १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०७:२० उर्जा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा सोझै विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले आजराति १२ बजेबाट २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा खरिद गरी ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्ने भएकाे हाे ।
योसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य बताए । पहिलेबाटै सम्पूर्ण तयारी गरिएकाले अनुमति पाउनासाथ भारतीय बजारमा प्रवेश गरी विद्युत खरिद गर्न प्राधिकरण सफल भएको उनकाे भनाइ छ ।
अघिल्लॊ सीसीएमसीले कुनकुन नाका खोल्न सिफारिस गर्‍यो ? [सूचीसहित]
पछिल्लॊ निषेधाज्ञामा थप कडाइ, के हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्था ?
काठमाडौं ।बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल …